China Center Drive lathe Yekutsigira Roller fekitori uye vagadziri | Oturn
Kaviri-kumagumo CNC lathe
Iyo miviri-yekupedzisira CNC lathe ndeye inoshanda uye yepamusoro-chaiyo muchina. Iyo workpiece yakadzvanywa inogona kushandura iyo yekunze denderedzwa, kumagumo kumeso uye yemukati gomba panguva imwe chete. Iko kugadzirwa kwekugadzira kwakakwirira kupfuura kwetsika maitiro, uye coaxiality uye kunyatsoita kwezvakagadziriswa zvikamu zviri nani.
Zvinoenderana nechikumbiro chevatengi, kurodha uye kuburitsa zvishandiso zvekubatsira uye otomatiki kurodha uye kudzikisa zvishandiso zvinogona kupihwa zvisingaite. Iyo yekunamatira dhayamita yakatangira kubva from5mm-φ250mm, uye urefu hwekugadzirisa hwakatangira kubva ku140mm-3200mm ..
Anopesana hunyambiri-chokurukisa CNC lathe
Mushini wekushandisa unonyanya kushandiswa kutenderedza shaft ipfupi uye zvidiki dhisiki zvikamu.
Kuburikidza neiyo otomatiki kuchinjisa pakati peakateedzana maviri ekugadzirisa ekugadzira mashini, muchina unopedzisa kugadziriswa kwegomba remukati, denderedzwa rekunze uye mativi ese echikamu zvichiteerana.
Muchina uyu unogona kuve nemashiripiti, otomatiki kurodha uye kudzikisa uye ekuchengetedza maturusi kuti apedze zvakazara zvoga kugadziriswa kweparts.t inonyanya kugadzirirwa kutendeuka kugadzirisa kwepfupi shaft uye zvidimbu zvidimbu zveplate.
Kutsigira Roller Machining Solution
Tsigiro roller ndeimwe yezvakakosha zvikamu zve "mavhiri mana nebhande rimwe" mune zvinokambaira mabhurldozers uye emagetsi macheriya.
Pane zvirevo zvina zvegurldozer rollers uye manomwe maratidziro evhavhavha roller, zvinoenderana neyedu aripo mamodheru, isu takakamurwa muzvikamu zvitatu:
Tsigira roller roller specification uye yakakurudzirwa muchina
Roller yekunze dhayamita
Rough 234 (chigadzirwa chakapedzwa 225)
Rough 286 (chigadzirwa chakapedzwa 279)
Schematic dhizaini yekutsigira roller inogadziriswa nemuchina zvinotevera
SCK205S kaviri-mugumo CNC lathe
■ Muchina unotora 450 yekurerekera mubhedha dhizaini, iyo ine kuomarara kwakanaka uye inyore chip kubviswa.
■ Bhokisi rekurukisa rinobatanidza zvinhu zvitatu zvechigadziko chekugadzirisa, yekugadzirisa uye yekukochekera humbwa, ine compact dhizaini uye rakavimbika basa. Chigadzirwa chacho chakadzvanywa nemagetsi. Iyo yekuchinjisa dhayamita yeiyo clamp yakakamurwa kuita matombo maviri.
The Chinosunga ndechorudzi rwecollet. Kugadziridza nzara kunoiswa mune yakasununguka chuck kutsiva ekugadzirisa zvikamu uye nekuchinja iyo yekunamatira dhayamita. Iwe unongoda kutsiva iyo yekugadzirisa nzwara, iyo inokurumidza uye iri nyore.
■ Maturusi mazhinji anofinha anodikanwa zvinoenderana nezvikamu zvakagadzirwa. Kuti udzivise kupindira kwezvishandiso, turret inogadziriswa, uye dhayamita inotenderera yemusoro wekucheka wakakura. Kuti tambo iwedzere kuomarara, iyo yepakati kukwirira kweturu iri 125mm.
■ Mushini unogadzirirwa nekaviri-chiteshi kudzora system, uye maturusi maviri akazorora anogona kusunganidzwa neshinda panguva imwe chete kana zvakasiyana kupedzisa panguva imwe chete kana kuteedzana kugadziriswa kwemativi ese echikamu.
■ Kuti usangane nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi vakasiyana, chishandiso ichi chemuchina chinogona kuve chakashongedzwa nekweseri / kurudyi koni yevatengi kuti vasarudze.
■ Kana kuri kurodha uye kuburitsa, parizvino kuri kurodha uye kudzikisa. Tichifunga nezve huremu hunorema hwemavhiri anotsigira, truss-mhando kana yejoinhi-mhando otomatiki kurodha uye kudzikisa michina inogona kuve yakagadzirirwa, pasi pekutaurirana nemutengi.
Kunonyanyisa wekutendeuka dhayamita yemubhedha
Kunonyanyisa kutenderera dhayamita yekutsvedza muviri
Kunonyanyisa clamping dhayamita
Kunonyanyisa kugadzira urefu
Chokurukisa clamping magadzirirwo
Chokurukisa mugomba dhayamita
Kureba kubva kurukanda pakati kusvika pasi
Kurumidza kuenda kumberi
Slewing servo, kukiya hydraulic
Kunze banga banga saizi
Dhayamita yeinofinha bhaa
Saizi yemuchina (kureba x upamhi x kukwirira）
Pashure: Flat Rudzi Lathe
Zvadaro: CNC Pipe Threading Lathe